ဘင်္ဂါလီအရိပ်ခိုပြီးဘင်္ဂါလီမကောင်းပြောတဲ့ (ရမလ-အတွင်းရေးမှူး)စောမြရာဇာလင်းနှင့် အင်တာဗျူး ကောက်နုတ်ချက် … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဘင်္ဂါလီအရိပ်ခိုပြီးဘင်္ဂါလီမကောင်းပြောတဲ့ (ရမလ-အတွင်းရေးမှူး)စောမြရာဇာလင်းနှင့် အင်တာဗျူး ကောက်နုတ်ချက် …
ရိုဟင်ဂျာ အက်သနစ် ဟုတ် မဟုတ် (Nov 6, 2012)
လောကပါလတရားများ ထွန်းကားပါစေ မြန်မာပြေ(ပြည်) (Oct 16, 2012)
လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ဘာကြောင့် မရပ်တည်နိုင်ရမှာလဲ ! (Oct 1, 2012)
Grand Strategy (Sep 13, 2012)
Brainwashing (သို့) ဦးနှောက်ကျင်းခြင်း (Sep 12, 2012)
လူမျိုးတမျိုးကို အနုနည်းဖြင့် ဖျက်စီးခြင်း နည်းလမ်းအချို့ (Jul 5, 2012)
ဆရာထက် လက်စောင်းထက်သည့် တပည့်ကျော် (Jun 30, 2012)
ကျွန်တော်တို့က ဘာတွေလဲ? (Jun 7, 2012)
တို့တွေဘယ်ထိအောင်ဆက်မှားနေကြဦးမှာလဲ..? (Feb 3, 2011)
အရှိတရား (Reality) (Jan 23, 2011)
This entry was posted on December 26, 2012, in အင်တာဗျူး, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Suu Kyi offers help on Rohingya issue
Rophingya Genocide : နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများလူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း Video News →